Sheekh Shariif " Guddaha Dalka Soomaaliya Ayuu Doorasho Dhaxal Gal ah Ku Qabtay " -
HomeArimaha bulshadaSheekh Shariif ” Guddaha Dalka Soomaaliya Ayuu Doorasho Dhaxal Gal ah Ku Qabtay “
Sheekh Shariif ” Guddaha Dalka Soomaaliya Ayuu Doorasho Dhaxal Gal ah Ku Qabtay “
May 10, 2021 F.G Arimaha bulshada, Wararka 0
Kow iyo labaatan (21) sano oo dowladnimada Soomaaliya, dibad wareeg dalka bannaankiisa lagu dooddo aheyd. Kow iyo labaatan sano oo Djibouti, Addis Ababa, Sanca, Qaahira, Djibouti, Mbagathi/Eldoret/Nairobi, iyo Djibouti markale loo dhaxeeyey ayuu kusoo afmeeray in Madaxweynaha Soomaaliya, lagu doorto ciidda Soomaaliya dusheeda iyo calanka Soomaaliya, hoos tiisa.
Saddex (3) sano iyo todobo (7) bilood oo keliya ayuu sheikh Sharif Sheikh Ahmed , oo Djibouti lagu doortay January 31, 2009 ku meel mariyey in Madaxweynihii asaga xigay Muqdisho, lagu Doortay.
Afar iyo toban bilood (14) oo kamid ah saddexda sano iyo dhowrka bilood, ayuu ku hirgaliyey in dowladnimada Soomaaliya, oo kumeel gaar, gobonimadeedu kala dhantaalantahay ku dhammeystiray in ay noqoto dowlad rasmiya oo ka baxda ku meel gaarnimada, dalkana gaarsiiyey dowladnimo iyo gobonimo taam ah oo Soomaaliya, kula tartami karto asaageed.
Rajo Cabdiqaasim Salaad, oo August 27, 2000 loogu duceeyey Carta, iyo Cabdullaahi Yuusuf, oo October 10, 2004 Nairobi, lagu doortay, riixi kari waayeen ayuu rucle orad Xamar, uga rumeeyey in September 10, 2012 dalka gudahiisa doorasho ka dhacdo.
Ma ahayn howl sahlan. Sida ay ku dhacdayna dhowr sadar laguma sifayn karo. Hayeeshee, safar adag oo xorreyn xabbadi ku leefayso iyo xag–xaggasho siyaasadeed oo aan la isku naxayn ayuu ka xuubsiibtay.
Dal siyaadadiisa madax–bannaani iyo qaan–gaarnimadiisa qaranimo su’aalo waa weyni dul hogonayaan, si cadna ay gacanta ugula jireen taladiisa International Contact Group (ICG) oo markaasi United States iyo #Italy, hogaaminayeen ayuu gaarsiiyey in doorasho Gudoomiye Jawaari iyo Xildhibaan Maryan Cariif, gar wadeen ka yihiin looga maarmo gacanta iyo talada ICG.
September 10, 2012 markii laga guulaystay waxa uu hadal kusoo xiray, ‘‘waxaan ka baxayaa saaladaan (qolkaan) anoo cuqdad qabin oo gacan la igu siiyey shaqadeydii, aaminsanna in aan soo gaarsiiyey dalka maanta in uu ka baxo ku meel gaar, laguna doorto madaxda qaranka caasimada Soomaaliya’’.
Sooyaal lagu faani karo ayuu ka tagay. Waxa uu si la yaableh iskugu tolay July 6, 1967 iyo September 10, 2012 in ciidda Soomaaliya, dulsheeda lagu wada dabaal dago. Dunta iyo irbadda uu wax ku tolayey waa dastuur iyo doorasho dalka gudahiisa lagu diyaarshay.
Shan iyo afartan (45) sano oo Xasan Sheekh iyo Cabdirashiid Cali Sharma’arke, u dhaxaysay ayuu isku xiray.
September 16, 2012 ayuu si rasmiya oo xilkasnimo waayeel ku dheehan tahay xilka ugu wareejiyey doorasho guushu ku raacday walalkiis Hassan Sheikh Mohamud.
Xujo adag ayey aheyd in xilka si nabad ah la isugu wareejiyo. Xilkas oo keliya ayaa xujadaas kasoo baxa. Waana uu ka soo baxay si sharaf badan Madaxweyne Sheikh Sharif.
W/Q Mahad Gelle